Airnotes inotibvumidza kutora zvinyorwa nekukurumidza neMac yedu | Ndinobva mac
Airnotes inotibvumidza kuti tikurumidze kutora zvinyorwa neMac yedu
Kana zvasvika pakutora manotsi, isu tinogona kuzoshandisa MacOS Notes application, application inotibvumidza kuti tivabvumiranise pamwe nemamwe maIOS-based devices. Asi kana tichigadzira zvinyorwa, tinofanirwa kuita matatu ekutsikirira kudzamara chinyorwa chisina chinhu chatinonyora pasi zvatinoda, kungave irworwo rwekutenga, basa rakamirira, chishandiso chatiri kuda kurodha pasi ... PaMac App Store tinogona kuwana iyo Airnotes application, chishandiso icho chatinogona kukurumidza kutora manotsi pamwe nekuchiyananisa pamwe nemamwe madivayiri akachengetedzwa neApple yeIOS, nekuda kwe application ichakurumidza kusvika kuApp Store.
Airnotes chishandiso chiri nyore uye chine simba chekutsanangura chero chinhu - kubva pane yakapfava katsamba kuenda kune refu mavara. Inokurumidza, inonzwisisika, uye yakanaka. Zvese zvirimo zvinowiraniswa kuICloud saka haufanire kunetseka nezvekurasa data rako. Tinogona zvakare kugadzirisa application kusarudza font yedu yatinoda yekugadzirisa. CNeshamwari yayo yeIOS ichibuda munguva pfupi, iwe uchakwanisa kugadzirisa zvinyorwa zvako paunenge uchienda. Airnotes chishandiso chekushandisa kuchengetedza yako yekufambisa inoshanda.
Kugadzira noti nyowani tinongofanira tinya peni inomiririra iko kunyorera uye iri mune yepamusoro menyu bar. Pakati pesarudzo dzekugadzirisa, Airnotes inotibvumira kwete chete kuchinja saizi yefonti, asi zvakare inotibvumidza isu kuti tishandure font font. Ichi chishandiso chine mutengo wenguva dzose we0,99 euros, asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikanda mahara. Airnotes inoda macOS 10.11 kana gare gare uye 64-bit processor. Iyo inongobata pamusoro pe4 MB pane yedu hard drive uye yekupedzisira kugadzirisa iyo application inogamuchirwa yaive munaGunyana wegore rapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Airnotes inotibvumidza kuti tikurumidze kutora zvinyorwa neMac yedu
TwelveSouth BookArc Mira Zvino Inowanikwa muSpace Grey
Safari Technology Preview 31 yakatoburitswa kare